UGonyo olutsha lwaBantwana lwe-COVID-19: Inenekazi lokuqala lase-US liyavunywa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » UGonyo olutsha lwaBantwana lwe-COVID-19: Inenekazi lokuqala lase-US liyavunywa
Isibhedlele saBantwana saseTexas besibambe iNenekazi lokuqala lesizwe uJill Biden, u-Ed. 5.
Isibhedlele sabantwana sokuqala kukhenketho lwabo - oluya kubandakanya izikolo, iicawa, kunye neeholo zedolophu kulo lonke elaseMelika - iTexas Children's isebenzisana ne-White House ukunceda ukufundisa uluntu ngokhuseleko kunye nokusebenza kwesitofu sokugonya, esandula kuvunywa yi-CDC kulo mncinci. iqela lobudala.
I-Congressman yase-US u-Al Green kunye ne-US Congresswomen uLizzie Fletcher kunye no-Sheila Jackson Lee bajoyina uDkt. UBiden kunye noMurthy eTexas yaBantwana ukugxininisa inkxaso yabo kwisitofu sokugonya se-COVID-19 sabantwana.
Iintsapho ezininzi zezigulana ezityelele ikliniki yesitofu sokugonya saBantwana eTexas ngeCawe zothuswa lutyelelo lwenenekazi lokuQala kwaye bonwabele ukunxibelelana naye ecaleni kwezinja zonyango zasesibhedlele, uPinto no-Elsa, kunye nabalinganiswa beMarvel, uSuperman kunye noWonder Woman. Abantwana baseTexas babonelele ngamatikiti asimahla e-Houston Rockets kwiintsapho ngokuqeshwa kogonyo olucwangcisiweyo emva kwemini ngeCawa.
Ngexesha lokundwendwela kwakhe esona sibhedlele sikhulu sesizwe sabantwana, uGqr. Biden kunye nezigulana zabantwana babhale iimpembelelo zabo zokufumana isitofu sokugonya i-COVID-19 kwiipowusta ezinogwebu, abathi abantwana kamva balibonisa phambi kodonga lwebhaluni enemibala kwinkomfa yabezindaba ePavilion. kubafazi. Abantwana bathathe eli thuba babuza uGqr. Biden ukuba kutheni efuna ukugonywa, kwaye waphendula wathi wenze njalo "kubahlobo bakhe, abafundi kunye neklasi yomthambo." Ngokunjalo, izigulana zabelana ngokuba ziye zagonywa “ukuba ziphinde zidlale imidlalo, zigcine iintsapho zazo zikhuselekile, kwaye zonwabele amatheko omhla wokuzalwa wabahlobo.”
UJim Versalovic, MD, Ph.D., oyinkokeli ye-Texas Children's COVID-19 Command kunye nePathologist-in-Chief, ukhaphe uGqr. Biden kunye noGqr. Murthy kutyelelo lwabo lwekliniki yesitofu sokugonya esibhedlele. USarah Brown, isigulana esineminyaka eli-12 ubudala esandula kufumana isitofu sokugonya i-COVID-19 ngomhla wakhe wokuzalwa, wayekunye neNenekazi lokuqala kukhenketho lwakhe.
UJulie Boom, MD kunye noJermaine Monroe - oosihlalo abadibeneyo beTexas Children's COVID-19 Task Force - kunye noPeter Hotez, MD, Ph.D. kunye noMaria Elena Bottazzi, Ph.D. - abalawuli abasebenzisanayo beZiko loPhuhliso lweSitofu kwiKholeji yaBantwana yaseTexas kunye neBaylor College of Medicine - nabo babekho ukwamkela iindwendwe ezikhethekileyo esibhedlele ngeCawa.
Ukuza kuthi ga ngoku, abantwana baseTexas banikezele ngogonyo lwe-COVID-19 kubantwana abangaphezu kwe-17,000 abaneminyaka eyi-12-15. Isibhedlele siceba ukugonya ngaphezulu kwe-38,000 yabantwana ngokuchasene ne-COVID-19 ngempelaveki yoMbulelo-emele ngaphezulu kwe-5 yeepesenti yabantwana bendawo enkulu yaseHouston abaneminyaka eyi-5-11 ubudala - kwaye sivule i-22,000 yokuqeshwa kwedosi yokuqala eyongezelelweyo yokugonya ngokukhuselekileyo phantse i-10. ipesenti yabantwana abaneminyaka emi-5-11 ubudala kule ndawo ngoSuku loNyaka oMtsha.
Ukongeza ekulawuleni ugonyo lwe-COVID-19 kwiZiko lezoNyango laseTexas, iWoodlands, kunye nekhampasi yesibhedlele saseNtshona, iTexas Children's iyaqhubeka nendima yayo yokuzisa isitofu kuluntu lwaseHouston kwiikliniki ezikhethekileyo kuwo wonke lo mmandla. Izigulana kunye nabanonopheli abafuna ukugonya abantwana babo banokucwangcisa isitofu sasimahla se-Pfizer COVID-19 ngokusebenzisa umcwangcisi wesibhedlele we-COVID-19. Ivalethi yasimahla okanye indawo yokupaka eqinisekisiweyo ibonelelwa kwiintsapho ezityelela iikhampasi ezintathu zasesibhedlele zaBantwana zaseTexas kwesi sitofu sokugonya.